Sasiiliya - Wikipedia
Sasiiliya, Talyaaniga. Sicily (Talyaani: Sicilia [sitʃiːlja]; Sicilian: Sicìlia) waa jasiiradda ugu weyn ee badda Mediterranean. Waa gobol madaxbannaan oo Talyaani ah, Koonfurta Talyaaniga iyo jasiiradaha yar yar, oo si rasmi ah loo yaqaano Regione Siciliana.
Sicilyadu waxay ku taallaa Badda Mediterranean dhexe, koonfurta jasiiradda Talyaaniga, taas oo ay kala soocaan Biyaha Dhuxul ee Messina. Meelaha ugu caansan waa Mount Mount, oo ah kan ugu dheer ee firfircoon ee Europe,  iyo mid ka mid ah kuwa ugu firfircoon adduunka, hadda waa 3,329 m (10,922 ft) sare. Jasiiradu waxay leedahay jawi caadi ah Mediterranean.
Caddaynta ugu horreeya ee suugaanta ee hawlaha bani'aadamka ee jasiiradda waxay ka timaadaa 12,000 BC.  Qiyaastii 750 BC, Sicily waxay lahayd saddex fannaani ah iyo daraasiin gumeysi oo Giriig ah, iyo 600-sano ee soo socda, waxay ahayd goobta Sicilian Wars iyo Dagaalkii Punic. Xilligii dayrta ee Boqortooyada Roomaanka ee qarnigii 5aad AD, Sicily waxaa lagu xukumay inta lagu guda jiray qarniyadii Hore ee Vandals, Ostrogoths, Boqortooyada Byzantine, iyo Emirate of Sicily. Nimanka Norman oo ka soo jeeda Koonfurta Talyaaniga ayaa keenay in la abuuro Boqortooyada Sicily, taas oo markii danbe ay xukuntay Hohenstaufen, Aqalka Capetian ee Anjou, Spain, iyo House of Habsburg  Ugu dambeyntii waxaa lagu soo koobay Golaha Bourbon ee Boqortooyada Naples sida Boqortooyada Labaad Sicil. Waxay noqotay qayb ka mid ah Talyaaniga sannadkii 1860 ka dib markii uu soo kiciyay masruufka masruufka, kacdoon uu hoggaaminayey Giuseppe Garibaldi inta lagu guda jiray mideynta Talyaaniga iyo codsi. Sicily waxaa la siiyey xaalad khaas ah oo ah gobol madax-bannaan 15-kii Maajo 1946, 18 maalmood ka hor aftidii dastuurka Talyaaniga ee 1946-kii. Inkastoo, madax-bannaanida intooda badani weli wali ah mid aan la fahmin, gaar ahaan madax dhaqaale, sababtoo ah sharci-dejinta madaxbannaan ayaa dib loo dhigay by guddiga parityetic (50% Talyaaniga, 50% Gobolka Siciliana), tan iyo 1946.
Sicily waxay leedahay dhaqamo taajir ah oo gaar ah, gaar ahaan marka la eego farshaxanka, muusikada, suugaanta, cunnooyinka, iyo dhismaha. Waxay sidoo kale ku jirtaa meelaha muhiimka ah ee qadiimiga ah iyo qadiimiga, sida Necropolis of Pantalica, Dooxada Temples, Erice iyo Selinunte.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Sasiiliya&oldid=192146"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 28 May 2019, marka ee eheed 13:44.